Chirming Akwụkwọ Mmado - Imewe Mmewe
Akwụkwọ Mmado Mgbe Sook dị obere, ọ hụrụ nnụnụ mara mma n’elu ugwu mana nnụnụ na-efega ọsọ ọsọ, na-ahapụ naanị ụda n’azụ. O lere anya n’elu igwe choo nnunu, mana ihe ozo o huru bu alaka osisi na oke ohia. Nnụnụ ahụ nọgidere na-abụ abụ, ma ọ maghị ebe ọ nọ. Site na mgbe o di obere, nnụnụ bụ alaka osisi ya na nnukwu ọhịa nye ya. Ahụmahụ a mere ka ọ jiri anya nke uche hụ ụda ụmụ nnụnụ dịka oke ohia. Ofda nnụnụ na-eme ka uche na ahụ dịrị. Nke a dọọrọ mmasị ya, o jikọtara nke a na mandala, nke na-anọchite anya ọgwụgwọ na ntụgharị uche.
Aha oru ngo : Chirming, Aha ndị na-emepụta ya : Sook Ko, Aha onye ahịa : Sejong University.
Akwụkwọ Mmado Sook Ko Chirming